Gabar soomaali ah oo ay maxkamada sare ee wadanka ay ku wayday wax danbi ah - NorSom News
Gabar soomaali ah oo ay maxkamada sare ee wadanka ay ku wayday wax danbi ah
Gabadhan oo 29 ah ayaa waxaa loo heestay inay been ka sheegtay la dhalashada Xasan Dhuxulow oo ahaa ninkii soomaali/norwiijiga ahaa ee ka qaybqaatay weerarkii Westgate ee Nairobi. Gabadhan ayaa ku dhalatay Soomaaliya laakiin Norwey timid xili hore, waxa ayna qaab qoys ahaan ku wada yimaadeen Xasan dhuxulow. waxa ayna ku diiwaan gashanaayeen inay walaalo yihiin. Baaritaan kadib ayaa waxaa soo baxday inay ahaayeen dad isku meel ku koray, laakiin aan aheyn walaalo dhiig ah.
Bil kadib weerarkii Westgate ayaa gabadhan lagu dacweeyay eedaymahan, waxa ayna sheegtay inay u cabsaneysay in lagala noqdo dhalashada wadanka iyo waliba degenaanta wadanka, maadaama ay markii horeba wadanka ku yimaadeen qaab qoys ahaaneed. Maxkamada sare ee gobalka Agder ayaa markii hore ku waayay gabadha wax danbi ah, laakiin dacwad oogayaasha booliska ayaa racfaan ka qaatay arintaas.
wareegii labaad ee maxkamada ayaa hada soo dhamaaday ayaa ugu danbeyn waxaa gabadhan lagu waayay wax danbi, maadaama ay u cabsanaysay nolosheeda.
les saken på norsk her:
Previous articleSafia Abdi Haase oo markii labaad ku guulaysatay bilad sharaf .
Next articleNin soomaali ah oo loo xiray fal dil ah oo 2008-dii ka dhacay Oslo